Kungcono kanjani futhi nini ukuqala ukujwayela ingane embizeni
Ukufundisa amakhono okuhlanzeka yisigaba esibalulekile empilweni yazo zonke izingane. Kodwa-ke, kanjani nokuthi nini kungcono ukuqala ukujwayela ingane embizeni, akubona wonke umuntu owaziyo. Azikho izincomo zomhlaba wonke - zonke izinyane liqala ngendlela yakhe.
Isikhathi sesifikile? Izingxabano mayelana nokuthi uzoqala nini ukufundisa ingane ebhodweni, ungayeki. Abanye babhekisela kokuhlangenwe nakho koomama nogogo abakholelwa ukuthi ingane kufanele ifundiswe amakhono okuhlanza kusukela ngesikhathi efunda ukuhlala, okungukuthi, kusukela ezinyangeni ezingaba yisithupha. Abanye bahlehlisa ukutholakala kwebhodlela kuze kube yilapho ingane ineminyaka eyodwa ubudala, abanye bangasheshi nhlobo futhi balinde iminyaka engu-2-3 lapho umntwana eqala ukuqonda. Noma nini lapho unquma ukuqala inqubo yokufunda eyinkimbinkimbi, into esemqoka okudingeka uyikhumbule ukuthi izingane ziqala ukucela imbiza uma zivuthwa ngokomzimba nangokwengqondo. Le nqubo yemvelo ayinakuphazamiseka noma ngokuthonya okuthandwayo, noma ngokucindezela. Ngonyaka wokuqala wokuphila, ingane ingakabi nesikhundla sokulawula ukuphuma kwayo: ukuma kwakhe kokusebenza komzimba kwenzeka ngokucabangela, njengoba isisu nesibeletho sigcwalisa. Kulesi sigaba, ingane ingakwazi "ukubamba" kuphela - isibonelo, amathuba okuphakama ukuthi umntwana, evuka ekulele, uzokufuna "ngendlela encane" - nje ngalesi sikhathi futhi ungamnika imbiza. Ukuze wenze isimo sengqondo ngokuqondene nesazela somuntu siqu, kuyadingeka ukuba ingane yakhe izintambo ze-neural ezinikeza ukudluliselwa "kwesignali" esitesheni nesibilini ebuchosheni, futhi ngenxa yalokhu ingane kufanele ikhule kancane. Amakhono okuhlanzeka aqala ukwakha kumntwana esikhathini esisukela ezinyangeni eziyi-12 kuya kwezingu-18: kulesi sikhathi lapho imisipha ye-anus ne-sphincter yesigqila iqina, futhi ukuthuthukiswa kwengqondo yomntwana kufinyelela ezingeni elithile. Ukulawula okuphelele kwesisu nesisindo se-rectum kuyaba khona cishe eminyakeni emithathu. Ngokuvamisekile, ingane iqala ukulawula izibeletho ebusuku, ke - emini, bese-ukulawula isilonda emini, futhi ekugcineni - ebusuku. Kwezinye izingane, ukulala ngendlala kuqhubeka iminyaka engama-4-5 - futhi lokhu kuvamile futhi kuvamile. Kuyathakazelisa ukuthi amantombazane aqala ukucela ibhodlela cishe izinyanga ezingu-2-3 ngaphambi kwalabafana.
Amantombazane ahlukumeza ubulili besilisa nakwezinye izici: njengomthetho, bafunda ukuhlala ngaphambili bese benza ukunyakaza okuningi ngokuhlakanipha. Bathuthukisa kangcono umbono nokuthuthukiswa kwamakhono. Ososayensi basikisela ukuthi leli qiniso libangelwa ukuthi i-hemispheres engakwesokunxele nengakwesokudla ebuchosheni nabafana abakhula ngokuhlukile.
Ukuqala ukujwayela ingane embizeni akuyona inqubo elula, efuna abazali ukuba banakekele futhi banesineke. Musa ukuphishekela imiphumela esheshayo, ungalindeli ukuthi ingane izokwazi ukuqonda isayensi eyinkimbinkimbi "yobumba" ezinsukwini ezimbalwa, into eyinhloko ukuthi uzoba nesimo sengqondo esihle kule nqubo. Okokuqala, faka ingane embizeni, uchaze ukuthi kungani kuyadingeka. Nika ingane ukuthi ithinte into entsha ezithakazelisayo, unikele ukuhlala kuso. Ungakwazi "ukulahlekelwa" isimo ngezidakamizwa, amathoyizi athambile. Kuyadingeka ukuba umntwana aqaphele injongo ebhokisini. Ukuze ingane ihlakulele isigqi esithile, yitshale ebhodweni ngaphambi nangemva kokudla, ngaphambi nangemva kokulala komusi, ngaphambi kokulala ubusuku nangemva kokuvuswa (futhi zonke izinsuku kufanele kube cishe ngesikhathi esifanayo). Uma ingane isidinga "i-night vase", qiniseka ukuthi uyomdumisa ngenxa yayo, ithi ungumuntu omuhle. Kodwa uma kungekho mphumela, shiya ukuze uhlale ebhodweni imizuzu engaphezu kweyishumi akufanele kube. Ungalokothi uhlukumeze ingane ngenxa yokungaphumeleli, uma kungenjalo uzokuthuthukisa isimo sengqondo esibi ngokuqondene nenqubo yokuhamba kwemvelo. Ingane, ezwa ukuthi idinga ukukhululeka, ingaqala ukufihla kuwe, izama ukwenza ngasese izindaba zayo, noma izozama ukuvimbela ngamabomu isihlalo, okungaholela ekuqotheni. Zama ukuhlala ukhaliphile futhi uzwele kulezi zindaba futhi ungasheshi isikhathi - ngemva kwakho konke, ingane nayo ayihambisani nokuhamba ngamabhulukwe angcolile. Ukuvusa ingane ebusuku ukuze umnike ukuba ahlale ebhodweni akudingekile: cishe, umntwana ngeke ajabule kakhulu, futhi ngaphezu kwalokhu, angase alale kamuva. Ngenkathi ingane isabhalwa ebusuku, ungambeka embhedeni olahlekile noma abeke ishidi elingenamanzi embhedeni. Zama ukugcina ithrekhi yalezi zikhathi lapho ingane "yokwenza isivumelwano": ngokuvamile ngaphambi kokuhamba kwezidingo zemvelo ingane iyeka ukudlala, ithule, igxile - ngalesi sikhathi futhi udinga ukumletha imbiza. Ngokuhamba kwesikhathi, ingane ngokwayo iyoqala ukukutshela ukuthi ilungele indaba ebalulekile. Yiqiniso, lokhu kudinga ukuthi ingane isivele iqalile ukukhuluma kahle. Mhlawumbe uzofika ngamazwi athize kule nqubo. Kusukela ekuqaleni kokufunda amakhono okuhlanzeka, imbiza kufanele njalo ihlale egumbini lezingane, emehlweni, ukuze umntwana ngokwakhe azame ukuhlala kuye, asuse ama-panties akhe, noma akulethe ibhodlela bese ecela ukuthi umsize.
Kulokho, uma kungcono ukujwayela ingane embizeni, ochwepheshe bayabumbana. Isikhathi esihle sokuzijwayeza ngebhodlela lihlobo. Njengoba izingubo ezinganeni zivame ukumbalwa, angakwazi ukuzinakekela kalula. Futhi uma ingane futhi igcoba ama-panties, ingahlanzwa futhi yomiswe elangeni. Ngesikhathi sokuqeqesha kungcono ukuyeka ukusebenzisa izindiza ezilahlayo. Uma umntwana ehlala e-diapers njalo, akanalo isimo sokuphumula emva kokuchama, okusho ukuthi akukho isifiso sokususa lesi simo. Enye into - ama-panties anamanzi: ukuhamba kuwo akujabulisi kakhulu, futhi lokhu kuyisisusa esihle sokuqala ukusebenzisa ibhodlela.
I-POT POST CONVENIENT
Ngenhlanhla, izikhathi lapho izingane kudingeka zikwazi ukubhekana nezimbiza ezibandayo ezibandayo, ziye zaba yinto esedlule. Manje inqubo iye yaba mnandi ngazo zonke izici: izimbiza zepulasitiki azigcini nje kuphela, zifudumala, zilula, kodwa zihle kakhulu. Ezinye zazo zenziwe ngendlela yokudlala - izinja, amadada, imishini, njll. Amaminithi ambalwa asetshenziswe kule nkomo ngeke ashiye noma yikuphi ukuzwa okungajabulisi. Abanye abazali, bezama ukunikeza izingane zabo okuhle, bathenge izimbiza ngama-squeaks, izibani ezikhanyayo, umculo. Kodwa-ke, akudingekile ukuba nesithakazelo esikhulu kulokhu: ingane akufanele ikhohlwe ukuthi yini umgomo oyinhloko wokuhlala kwakhe kule ndaba. Imodeli enhle kunazo zonke ebhodweni labafana - nge-front inclinated: ngebhodlela elinjalo kangako ukuthi i-spray accidentally isakazeke ezinhlangothini. Cishe iminyaka emibili, ungafundisa umfana ukuba abhale ebhodweni emi. Uma ingane yakho ingabangane ebhodweni, iyoba enye yezinto ezibaluleke kakhulu ezinganeni. Ngakho-ke, ukuya ekotishi, lapho uvakashele, uhambo, ungakhohlwa ukuthi kufanele kuthathwe. Lokhu kungaba yindlela "yomgwaqo" - ibhodlela elincane, elincane futhi elilula (kungcono ukwethula ingane ebhodweni elisha kusengaphambili, ngoba ezinye izingane, sezivele zijwayele ukuwasebenzisa, ngezinye izikhathi zenqaba ukusebenzisa into abazi.) Ukusuka ebhodweni ungakwazi kancane kancane uhambe endlini yangasese. Ukwenza lokhu kusetshenziswe, ungathenga isitifiketi somntwana esikhethekile endlini yangasese: kuyobe ikhululekile kakhulu kwengane. Ngaphezu kwalokho, ungathenga isiteji esincane ezinqolobaneni zezimpahla zezingane, ukuze umntwana akwazi ukuyisebenzisa ukuze akhuphule indlu yangasese futhi afake imilenze kuyo. Kungakhathaliseki ukuthi kubonakala kunzima kanjani ukufundisa ingane amakhono okuhlanzeka, ngokushesha noma kamuva uzokwazi lokhu, ikakhulukazi - yiba nesineke futhi uphathe isimo ngokuthula. Ungaqhathanisi ingane yakho nezinye izingane, ungagunci kumakhelwane waseVasya - zonke izingane zikhula ngesivinini sayo. Futhi ungesabi uma inqubo yengane yakho ibambezeleka kancane. Konke ngesikhathi esifanele.
UKUTHUTHUKISWA KWAMAKHONO NGONYANGA
Ikhono lokulawula isifiso kubantwana kusukela ekuzalweni kuze kube neminyaka eyi-4 cishe lilinganayo. Indlela futhi uma kungcono ukuqala ukufundisa ingane embizeni ukubhekana nezidingo zakhe, kuncike ekusebenzeni kweminyaka.
Izinyanga ezingu-0-18. Ezinyangeni zokuqala zokuphila, umntwana uncibilikiswe izikhathi ezingaba ngu-25 ngosuku. Lokhu kwenzeka ngokungazi - ngesikhathi lapho imisipha yodonga lwesisu. Cishe eneminyaka eyisithupha ubudala usana luqala ukuvuthwa kancane kancane (izikhathi ezingaba ngu-20). Lokhu kuyisibonakaliso sokuthi imigudu yengane ye-neural iyaqhubeka nokuthuthukisa, imisipha yesinye isiyeka ukuhlangana njalo futhi manje ikwazi ukuqukatha umchamo owedlula.
Izinyanga ezingu-18-30. Ingane kancane kancane iqala umbono wokugcwala kwesisu kanye nomzwa wokufisa ukuchama. Manje ingane ingakwazi ukuxhuma izibonakaliso zomzimba wayo ngokugcwala isambiso - ngaphambi kokuba nje engakwazi ukuyenza. Izingane eziningi zingakwazi ukulawula i-sphincter yesilonda ekuqaleni komnyaka wesibili wokuphila, futhi ezimweni eziningi kuphela ngonyaka wesithathu. Bese bezwa isifiso sokuvuthwa ngisho nangaphambi kokuba isisu sigcwale.
Kusukela ngonyaka wesine wokuphila, izingane eziningi zingabambezela ukuthunyelwa kwesidingo esincane isikhashana, ngisho noma bezwa isifiso sokuvota. Bakwazi futhi ukuhlola "uma kwenzeka", ngisho nokugcwalisa kancane kwesinye. Into eyinhloko ukuthi ayiba umkhuba.
Ingane encane engasebenzi
Indlela yokufundisa ingane ukuba izimele
Ingabe izingane ze-Indigo isipho noma isijeziso?
Isaladi nama-beet kanye nemifula
Isaladi nama-blueberries nama-melon
Iklabishi eqoshiwe igcwele inyama nengulube
Borsch nge isitshalo seqanda
Yini okumele ukwazi owesifazane owathatha isando ezandleni zakhe?
Ama-Hair Hair Masks
Izincwadi zonke izintombazane okufanele zifunde
Ikhekhe le-sand nge-plums fresh
Imisebenzi yabazali bomyeni ngaphambi komshado
Imithetho ejwayelekile yokuziphatha ehhovisi
Ukuphila komuntu siqu kaTatyana Bulanova